Cashada Kirismaska ​​ee Ruushka | Safarka Absolut
Adduunka waxaa ku nool 2.400 bilyan oo Masiixiyiin ah oo u dabaaldega Kirismaska ​​si ka duwan, sida ku cad dhaqamada waddan kasta iyo madaahibta Masiixiyiinta ee ay ka tirsan yihiin. Munaasabaddan, waxaan kahadli doonnaa sida ciidaan looga xuso Ruushka iyo waa maxay cashada Kirismaska ​​ee qarankan.
Caadooyinka dalkani leeyahay ee ku saabsan taariikhdan jacaylka ayaa aad uga duwan wixii aan caadiyan u baran jirnay. Marabtaa inaad waxbadan ka ogaato ciida Kirismaska ​​ee Ruushka? Sii wad akhriska!
1 Goorma ayaa Kirismaska ​​looga dabaaldegaa Ruushka?
2 Sidee tahay Ciidda Kirismaska ​​ee Ruushka?
3 Soonka Dhaw
4 Cashada Kirismaska ​​ee Ruushka
5 Maxay yihiin riwaayadihii Kirismaska ​​ee laga heesay Ruushka?
6 Sideese Ruushku ugu dabaaldegaan Santa Nöel?
7 Sannadka Cusub ee Ruushka
8 Sidee Ruushku ugu raaxaystaan ​​Kirismaska?
Goorma ayaa Kirismaska ​​looga dabaaldegaa Ruushka?
Madaahibta Masiixiyiinta ee leh tirada ugu badan ee aaminka ah ee adduunka, Katooliga iyo Protestant, waxay u dabaaldegaan dhalashada Masiixa 25-ka Diseembar. Si kastaba ha noqotee, kaniisada Orthodox ma sameyso. In kasta oo in badan oo ka mid ah caqiidada, caqiidada, iyo cibaadooyinka lala wadaago kooxaha kor ku xusan, inta badan hoggaamiyeyaasha diinta ee Orthodox waxay u dabaaldegaan Kirismaska ​​Janaayo 7. Laakiin waa maxay ujeedku?
Xaqiiqdii, Orthodox, oo ay ku jiraan Ruushka, sidoo kale waxay u dabaaldegaan Kirismaska ​​25 Diseembar. Kaliya waxay raacaan kalandarka Julian, oo ah 7 Janaayo ee kalandarka Miilaadiga.
Sidee tahay Ciidda Kirismaska ​​ee Ruushka?
Si la mid ah sida ay Katooliggu u dabaaldegaan habeenka Kirismaska ​​ee Diseembar 24, dadka Ruushku waxay sameeyaan Janaayo 6. 10-ka habeennimo, laga bilaabo Katidralka Masiix Badbaadiyeha ee Moscow, madaxweynuhu wuxuu xaflad dhaqameed u qabtaa waddanka oo dhan.
Waxaa lawada ogyahay in Advent ay dhacdo kahor Kirismaska, oo ah waqti loo diyaar garoobayo dhalashadii Masiixa. Ruushka dhexdiisa halka caqiidada Orthodox ay ku badan tahay, Imaanshahu wuxuu dhacaa Nofeembar 28 ilaa 6 Janaayo. Marxaladdan, soon ayaa la sameeyaa oo ku dhammaada maalinta ugu dambeysa ee Advent iyadoo la sooman yahay maalintii oo dhan. Waa la jebin karaa oo la cuni karaa mar kale markay rumaystayaashu arkaan xiddigta koowaad.
Hadalka cuntada, Ma ogtahay waxa ay yihiin cuntooyinka caadiga ah ee lagu cuno cashada Kirismaska ​​ee Ruushka? Qoysasku badanaa waxay diyaariyaan cuntooyin kala duwan. Kuwani waa qaar ka mid ah kuwa ugu caansan:
Kutia: Mid ka mid ah cuntooyinka ugu waaweyn ee xafladda. Maaddooyinka la isticmaalay waxay leeyihiin macno astaan ​​u ah diinta Orthodox. Sidaa darteed sarreenku wuxuu tilmaamayaa sarakicinta Masiixa iyo malabku wuxuu soo bandhigayaa daa'in. Natiijadu waa cunno caado ah oo aad sidoo kale ku dari karto lowska, sabiibta iyo miraha poppy.
Goose dubay: Intii lagu gudajiray soo bixitaankii lama ogoleyn in la cuno hilib si marka Kirismaska ​​uu yimaado, Rushka ay si xamaasad leh ugu diyaariyeen suxuun leh maaddadan si soonka loo jebiyo Digaag duban ayaa ka mid ahaa suxuunta ugu caansan.
Doofaar: Saxan kale oo lagu cuno cashada Kirismaska ​​ee Ruushka waa nuujinta doofaarka ama sida Rushka ugu yeeraan "doofaarka caanaha". Waxaa la siiyaa duban leh boorash iyo khudrad. Waa wax iska caadi ah in la qaato dhamaadka Advent si loo afjaro soonka.
Coulibiac: Keeggan cufan ayaa ah mid lagu garaaco xaflad kasta waxaana sidoo kale inta badan laga bixiyaa cashada Kirismaska ​​ee Ruushka. Waxaa laga samayn karaa dhowr nooc oo cajiinka kala duwan leh kalluunka, bariiska, hilibka, khudradda, boqoshaada, ukunta. Waxay u eg tahay cunto dhammaystiran oo ku jirta hal xabbad keega ah!
Vinaigrette: Waa salad dhaqameed lagu diyaariyey baradhada, karootada, xididdo, pickles khal iyo saliid. Xitaa maanta wali waa mid ka mid ah suxuunta loogu jecel yahay cashada Kirismaska ​​ee Ruushka maxaa yeelay way fududahay in la diyaariyo oo aan qaali ahayn. Si kastaba ha noqotee, qoysaska doonaya inay khibraddooda sare u qaadaan heer kale waxay ku darayaan kalluun aad u fiican sida sturgeon.
Salad salad: Waa salad kale oo aad u fudud oo loo sameeyo ciidaha. Waxay leedahay karooto, basal, ukun la kariyey, baradho, qajaar la cunay, sausage iyo digir. Wax kasta oo lagu qaso majones.
Kozuli: Kani waa mid ka mid ah macmacaanka loogu jecel yahay Ruushka inta lagu guda jiro ciidda Masiixiga. Kuwani waa buskudka Kirismaska ​​ee lagu sameeyo rooti sinjibiil leh oo sharoobo ah oo lagu qurxiyo sonkorta miraha. Noocyada ugu caansan ee lagu soo bandhigo buskudyadan ayaa ah malaa'igaha, xiddigaha kirismaska, xayawaanka iyo guryaha. Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa qurxinta ciida.
Vzvar: Ka dib cashada Kirismaska ​​ee Ruushka cabitaankan waxaa loo adeegaa sidii macmacaan. Waxaa lagu diyaariyaa foornada oo leh compote ka samaysan miraha iyo miraha berdaha oo lagu xidho dhir, dhir udgoon iyo malab fara badan. Waa bedel fiican oo khamri kulul ama feer.
Miiska waxaa lagu daboolay caws, si loo xasuusto meeshii uu ku dhashay Ciise, marada cadna miiska ayaa la dul saaray.
Maxay yihiin riwaayadihii Kirismaska ​​ee laga heesay Ruushka?
Ruushka dhexdiisa caroliska caadiga ah ee Masiixiga waxaa lagu beddelay hees Slavic ah oo loo yaqaan Koliadki. Laxankan waxaa sida caadiga ah ku luuqeeyaa Habeenkii Kirismaska ​​koox dad ah oo wadada joogta oo ku labisan dharka gobolka.
Sideese Ruushku ugu dabaaldegaan Santa Nöel?
Ruushka, ma ahan Aabaha Nöel kan hadiyadaha siiya carruurta asagoo si dhuumaaleysi ah u maraya qiiqa guryahooda laakiin Ded Moroz oo uu weheliyo gabar uu awoowe u yahay Snegurochka. Dabeecadani waxay hadiyado u keentaa kuwa yaryar Maalinta Sannadka Cusub, kalandarka Ruushka ee Janaayo 12.
Sannadka Cusub ee Ruushka
Marka la tixgeliyo in Kirismasku yahay Janaayo 7 iyo Ciidda Kirismasku waa Janaayo 6, kalandarka Ruushka ayaa sii socda oo Sannadka Cusub waxaa loo dabaaldegaa habeenka Janaayo 12-13. Xisbiga waxaa loo yaqaan "Sannadkii Hore Ee Hore." Xiiso badan, sax?
Laga soo bilaabo waqtiyadii Soofiyeeti waxay ahayd xafladaha ugu caansan sanadka waana taariikhdan geedka sanadka cusub sanadka cusub sida caadiga ah waa la qurxiyaa, kaas oo loo caleemo saaray xiddig cas. Astaan ​​shuuciyadeed.
Sidee Ruushku ugu raaxaystaan ​​Kirismaska?
Dadka reer Russia waxay siyaabo badan ugu baashaalaan ciida masiixiga. Mid ka mid ah caadooyinka ugu caansan ee Ruushku ku qaato fasaxyada ayaa ku raaxeysanaya barafka barafka. Ficil ahaan way joogaan meel kasta!
Carruurta, bandhigyada indhaha ayaa loo habeeyay, mowduuca ugu weyn ee uu yahay dhalashada ilmaha Ciise iyo kuwa yaryar oo aad u jecel.
Dadka da'da ahi waxay doortaan inay u dukaameystaan ​​si ay u helaan hadiyado Kirismas ah. Bakhaarrada iyo xarumaha wax lagu iibiyo waxaa lagu sharraxay nuucyo kala duwan oo dhan, garland, geedo beroosh ah, rag baraf ah, iwm. Carruurta badanaa waxaa la siiyaa alaabta carruurtu ku ciyaarto sida adduunka oo dhan iyo dadka waaweyn waxaa la siiyaa buugaag, muusig, tiknoolajiyad, iwm.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Cashada Kirismaska ​​ee Ruushka
Fikradaha ku saabsan Hindiya